🥇सेलिब्रेटीहरू अघि र पछाडि
18-11-2019 | समाचार
हामी सबैलाई थाहा छ कि समयले माफ गर्दैन। र तपाईं बच्चाको रूपमा वा युवाको रूपमा कत्ति सुन्दर वा सुन्दर हुनुहुन्छ, तपाईंको उमेर बढ्दै जाँदा उनीहरूले तपाईंलाई रुचिकर, वा मिल्फे भन्छन् कि तपाईसँग बढी आकर्षक वयस्क बन्ने सुअवसर छैन। यस कारणका लागि हामीले सेलिब्रेटीहरूको अघि र पछिको शीर्षहरू बनाउन रोचक महसुस ग found ्यौं , जसले ती बच्चाहरूको बिकासलाई प्रतिबिम्बित गर्दछ जुन सिनेमाको दुनियामा धेरै जवान भनेर चिनिन्छ र प्राय: जसो यसमा अझै छन्। तपाईं देख्नुहुनेछ र आश्चर्यचकित हुनुहुनेछ कि सबैजना कसरी परिवर्तित भए, र कसरी प्रख्यातताले उनीहरूको जीवनमा परिवर्तन ल्यायो। ती बच्चाहरू अब युवा जीवनको मुख्य व्यक्ति हुन् वा परिपक्व हुन थाल्छन्। र सबै पहिले नै धेरै परिवर्तन भएको छ। केही, राम्रोको लागि, र अरूहरू यति धेरै छैनन्, जस्तो देखिन्छ ...
सानो छँदा, डेनियल र्याडक्लिफ त्यस्ता रूपमा चिनिन्थेन। यो केवल ह्यारी पॉटर थियो। वास्तवमा गाथामा हामी यसको विकास देख्न सक्दछौं, किनकि 8 वटा चलचित्रहरू १० बर्ष भन्दा बढी बनि सकेको छ। डेनियलले २००१ मा ह्यारी पॉटरको रूपमा शुरू गरे र उनको अन्तिम चरित्रको प्रतिनिधित्व २०११ मा भएको थियो। १ 1998 1998 in मा डेभिड कपरफिल्डमा सहभागी भए पनि, र २००१ मा पानामाको टेलरमा पनि सहभागी भए पनि यो युवा जादूगरको चरित्र थियो जसले ख्याति यहाँ उहाँको अघि र पछिको पहिलो भाग सुरु भयो । यो पछि हो, जब उसले हेरी पॉटरको चरित्र बिगार्ने आरोप लगाएको थियो भने उसले "वयस्क" काममा भाग लिन थाल्यो। यद्यपि युवा रेडक्लिफले थिएटर, फिल्म र टेलिभिजनमा आफ्नो पेसा बनाउँछ।
कसले भन्दछ कि दायाँ तिरको जवान मानिस स्टुअर्ट लिटलको फिल्मबाट आएको जर्ज लिटल हो? यो " सेलिब्रेटीहरूको अघि र पछिको " हो! सानो जोनाथनले १ 1996 1996 in मा फिल्म जेरी मागुइरमा रेने जेलवेगरको चरित्रको रूपमा शुरूआत गरे। उनले ड्यासन क्रिक जस्ता केही टेलिभिजन श्रृंखलाहरूका धेरै एपिसोडहरूमा पनि अभिनय गरे। सन्‌ १ 1999 1999 In मा उनी स्टुअर्ट लिटिल माउसलाई ग्रहण गर्ने सानो व्यक्ति थिए, र २००२ को सीक्वलको भूमिकामा दोहोर्याए। लिप्निकीले २००० मा "दि लिटिल भम्पायर", र २००२ मा "एक अग्लो गिरोह" मा पनि अभिनय गरे। यो "स्टुअर्ट लिटल २" को रूपमा उस्तै समयमा बाहिर आयो। यी दुई चलचित्रहरू सफल थिए, र त्यसैले लिप्निकी किशोर र पूर्व-किशोर दर्शकहरूमा प्रख्यात भैसकेका छन्, यद्यपि व्यावसायिक सिनेमामा त्यति समर्पित नभए पनि अधिकांशले स्वतन्त्रमा ध्यान केन्द्रित गरे।
सानो इलियट, ET (1982) बाट, र उहाँको अघि र पछिको । के तपाईको मोटरसाइकलमा ET टोकरीमा टावलमा राखिएको केटाको दृश्य याद छ? खैर, त्यो केटा यो जवान मानिस हो। 90 ० को दशकको शुरुमा उनले वयस्क भूमिकामा अभिनय गर्न शुरू गरे, एन्थोनी पर्किन्सले "साइको," नर्मन बेट्समा खेलेको चरित्रको युवा संस्करणको मूर्त रूप लिएर। यो १ 199 199 in मा "लीजेन्ड्स अफ जोश" मा शमूएल लुडलो पनि थिए र २००२ मा उनले मार्टिन स्कोर्से द्वारा लि Gang्गार्डो डि क्याप्रियोको चरित्रको साथी जोनी सिरोककोको रूपमा "गैंग्स अफ न्यू योर्क्स" मा भाग लिए। हाल उनी एक अभिनेताका रूपमा काम गर्दछन् र संगीतकारको रूपमा पनि, र २०११ मा उनले संगीतकार हankक विलियम्स "अन्तिम सवारी" मा बजाए। यसले "विश्वासघात" जस्ता श्रृंखलाहरूमा भाग लिन जारी राख्दछ।
र हाम्रो शीर्षको नम्बर after पछि, हामी ET सँग अगाडि बढ्छौं र सेलिब्रेटीहरूको अघि र पछिको पछि । ड्र्यू ब्यारीमोर ती केटी थिइन जसले प्रसिद्ध एलियनका साथ गतिविधिहरू साझा गरे। यो व्याख्या गर्न समर्पित परिवारबाट आएको हो, यद्यपि ET चलचित्र हो जसले उसलाई प्रसिद्ध बनायो। उहाँ केवल years वर्षको हुनुहुन्थ्यो। उनले सिनेमाको दुनियामा निरन्तरता पाए तर उनले आत्महत्या समेत गम्भीर लत समस्याको सामना गर्नुपर्‍यो। गहन पुनर्वास उपचार पछि, उनको क्यारियर पुन: शुरू भयो, 90 ० को दशकको अन्तदेखि अहिलेसम्म असंख्य चलचित्रहरूमा अभिनय गरिसकेपछि (अरूमध्ये: "सबै जना भन्छन् म तिमीलाई प्रेम गर्छु", "उनीहरूले मलाई चुम्बन गरेन", "चार्ली एन्जलस" , "First० पहिलो उद्धरण", "तपाई गीत र म संगीत", आदि) जसले यसलाई धेरै पुरस्कारको लागि योग्य बनाउनुभएको छ। यो उत्पादनमा पनि सुरु भएको छ।
लियोनार्डो डि क्याप्रियो
हामीले लियोनार्डो डि क्याप्रियो स्क्रीनमा बढेको देख्यौं। हुनसक्छ ऊ प्रसिद्ध छ जसको बारेमा हामी पहिले र पछिको भन्दा राम्ररी अनुसरण गर्न सक्षम छौं। धेरै जवान भएकोले उसले पहिले नै टेलिभिजन शृ participated्खलामा भाग लिएको थियो र १ Life 1992 २ मा उनले रोबर्ट डि नीरोसँग "लाइफ अफ द चिट" र अर्को वर्ष "गिलबर्ट ग्रेप को गर्छन?" जहाँ उनले एक मानसिक अशक्त व्यक्तिलाई जीवन दिएका थिए, जसका लागि भूमिका उनलाई एक अस्कर र गोल्डेन ग्लोबका लागि नामित गरिएको थियो। प्रति वर्ष लगभग एक फिल्मको दरले, उनले "डायरी अफ ए विद्रोही", "रोमिओ र जुलिट", "टायटानिक", "कैच मिट हुन सक्छ", "गिरोहको रुपमा चिनिन्छ। न्यु योर्क "," द एभिएटर "," घुसपैठकर्ताहरू "," द रिडर "," ओरिजिन "," दि ग्रेट ग्यात्स्बी "," द वुल्फ अफ वाल स्ट्रिट ", लगायत अरु धेरैले नाम दर्ता गरेका थिए र पुरस्कार ती सबैका लागि पाएका थिए। केही समयको लागि, यो उत्पादनको दुनियामा पनि शुरू भयो।
"म कसरी तिम्रो आमालाई भेटें?" को चर्चित बारनी स्टिनसन (२००-201-२०१)) व्यावहारिक रूपमा उही युवा अनुहार थियो। बर्षहरु बित्दै जान्छन् उनीहरु संग दयालु छ, र ती मध्ये एक हो " प्रसिद्ध र पछिको पछि "। फिल्म र टेलिभिजनमा दुबै अभिनेता हुनुका साथै उनले लेखक, निर्देशक, निर्माता, गायकका रूपमा काम गर्छन् - उनले albums एल्बमहरू प्रकाशित गरेका छन् - र डम्बर पनि। २०११ मा उनी हलिउड बुलेभार्ड अफ फेममा उनको आफ्नै स्टार बाट सम्मानित भए।
चर्चित अभिनेत्री र गायक हिलारी डफ १० वर्षको उमेरमा सिनेमा जगतमा शुरु भएकी थिइन, यद्यपि उनले टेलिभिजन श्रृंखलाहरूमा केही सानो भूमिका खेलेकी थिइन। यदि तपाईं उनलाई " पहिले र पछाडि " हेर्नुभयो भने तपाईं हाम्रो विचार साझा गर्नुहुनेछ कि सानी केटीले पहिले नै सुन्दर महिला बनने उपायहरू औंल्याउँदै थिइन् उनी। उनको पहिलो सफलता २०० L मा डिज्नी च्यानलमा "लिज्जी म्याकगुइयर" बाट थियो - जब उहाँ १ 14 वर्षका हुनुहुन्थ्यो र २०० 2003 मा "लिजी सुपरस्टार"। हिलेरीले विशेष गरी बच्चाहरू र पूर्व-किशोरका लागि समर्पित चलचित्रहरूमा अभिनय गरिरहेकी थिइन्, र उहीमा समयले गायक, लेखक र रचनाकार, व्यवसायी महिला, फेशन डिजाइनर, मोडेल, र संयुक्त राज्य अमेरिकामा मानवीय कार्यहरू को रूपमा उनको क्यारियर शुरू गर्‍यो।
जस्टिन टिम्बरलेक पनि टेलिभिजनमा देखा पर्न सफल भए र अन्ततः उनी अमेरिकाको डिस्नी कार्यक्रम "मिकी माउस क्लब" मा रिलीज भए जहाँ उनले ब्रिटनी स्पीयर्स, क्रिस्टिना अगुएलेरा र रायन गोसलिंगलाई भेट गरे। १ 1995 1995 in मा कार्यक्रमको अन्त्यमा, उनी प्रसिद्ध गायक, एनसिन्कको एक गायकका रूपमा भाग लिनका निम्ति भर्ना भए, जुन २००२ सम्म उनले कम ब्यापारिक संगीतको साथ एकल क्यारियर सुरु गर्ने निर्णय गरे, र साथै यसमा एउटा ध्यानाकर्षण पनि गरे। चलचित्र संसार, जहाँ उनी अधिकांशतः रोमान्टिक कमेडीमा भाग लिइरहेका छन्। आज 35 35 बर्षको साथ, यो निस्सन्देह एक पहिले र पछि मौसम यद्यपि पछि प्रसिद्ध संग प्रसिद्ध छ ।
ब्रिट्नी ब्रिट्नी पनि "डिज्नी कारखाना" केटी थिइन। जस्टीन टिम्बरलेकको बारेमा कुरा गर्दा हामीले भनेजस्तै उनीहरूले "मिकी माउस क्लब" कार्यक्रममा भेटे। तिनीहरू भावनात्मक रूपमा केही समयको लागि सम्बन्धित थिए, ब्रिट्नीले उनको जीवनलाई चारै तिर मोड्ने निर्णय नगरेसम्म। १ 1999 1999 In मा, केवल १ years बर्षको साथ, उनले आफ्नो पहिलो हिट "बेबी एक पटक फेरि" प्रकाशित गरे, जुन तपाईं हाम्रो the ० को दशकको सर्वश्रेष्ठ गीतहरूमा पाउन सक्नुहुन्छ। १ 1999 1999 and र २००ween बीचमा उनले board एल्बमहरू बिलबोर्ड चार्टको शीर्षमा राखे, तर पछि विवाह, सम्बन्धविच्छेद, बच्चाहरू र दुर्व्यसन समस्याहरू पछि उनको जीवनमा ठूलो परिवर्तन आयो र उसको उपस्थिति पनि देखा पर्‍यो। उहाँ हाल आफ्नो क्यारियर पुन: शुरू गर्न कोशिस गर्दै हुनुहुन्छ, तर यो ब्रिट्नी होईन कि सबै दर्शकहरूलाई मन पराउँछन्।
मकाउले कुल्किन्स दुर्भाग्यवस सेलिब्रेटीहरूको अघि र पछाडि सबैभन्दा खराब हो। केवल years बर्षको साथ मनोरञ्जनको दुनियामा शुरू गरेपछि, उनले धेरै चलचित्रहरूमा भाग लिए र "होम एक्लो" फिल्महरूको श्रृंखलासँग प्रसिद्ध भए। यद्यपि केही अन्य फिल्महरू पछि उनी परिस्थितिको प्रबन्ध गर्न असफल भए र उनी रक्सी र लागूऔषधको समस्यामा फसे जसले गर्दा उनलाई उल्लेखनीय रूपमा खस्कियो। भाग्यवस, उनले न्याय संग समस्या पछि, एक निश्चित तरिकामा आफ्नो जीवन सीधा गर्न को लागी सफल भयो, र वर्तमान मा केही टेलिभिजन कार्यक्रमहरु मा देखीएको छ र एक चलचित्र बनाएको छ (यद्यपि उनी सबैभन्दा खराब अभिनेता को रूप मा नामित भएको छ ...)।
हामीले सुरूमा भनेझैं, समयले क्षमा गर्दैन ... वा गर्छ? त्यहाँ कुरूप युवा ducklings को मामलाहरु छन् कि धेरै चाखलाग्दा वयस्कहरु, जुन तपाईले माथि देख्नु भएको छ ... अन्य जो पहिले नै सुन्दर केटाहरू वा राम्री केटीहरू थिए उनीहरूको आकर्षण गुमाए बिना बढ्न सफल भएका छन्। के उनीहरु अपवाद हुनेछन्? आशा छैन। जे भए पनि, यो हाम्रो सब भन्दा आश्चर्यको प्रस्ताव हो " प्रसिद्दको अघि र पछाडि "। के तपाइँ कुनै रोचक हराइरहेको लाग्छ? हामी तपाइँको टिप्पणीहरूको लागि पर्खिरहेका छौं, र अग्रिम, धन्यवाद!
सबैभन्दा उत्सुक लोक चाडहरू
खेलाडीहरू जो म्याड्रिड र बार्सिलोनाका लागि खेले